Friday April 08, 2022 - 11:01:30 in Wararka by Xarunta Dhexe
* Kadib markii golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay uu xalay go’aamiyay in Ruushka laga joojiyo xubinnimada golaha xuquuqul insaanka ee Qaramada Midoobay, ayaa waxaa go’aankan soo dhaweeyay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. Zelensky wuxuu go’aanka ku tilmaamay tallaabo muhiim ah oo uu ku tilmaamay ciqaabta gardarrada Ruushka ee Ukraine. Biden ayaa hakinta ku tilmaamay mid xaqiijinaysa in Ruushku yahay waxa uu ugu yeedhay "Pariah caalami ah”.
* Suurtagalnimada xubinimada Finnish iyo Iswidishka ee NATO waxay qayb ka ahayd wada-hadalladii u dhexeeyay wasiirrada arrimaha dibadda ee gaashaandhigga ee Brussels, oo ah dawlado rasmi ah oo Maraykan ah. Afhayeenka Kremlin-ka Dmitry Peskov ayaa ku jawaabay hanjabaad dahsoon, wuxuuna sheegay in Ruushku uusan haysan wax kale oo aan ahayn in uu "isku dheelitiro xaaladda” iyo tallaabooyinkiisa, haddii Finland iyo Sweden ay ku biiraan NATO.
* Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyj ayaa ku baaqay in dib loo furo safaaradaha iyo qunsuliyadaha caasimadda Kyiv.
Xaaladda Borodjanka, 26 qof oo dhintay ayaa ilaa hadda laga soo saaray laba guri oo burburay, ayaa aad uga xun tii Butsja, sida uu sheegay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyj. Ma uusan bixin wax tafaasiil ah ama ma uusan bixin wax tirooyin ah, laakiin wuxuu sheeganayaa in ay jiraan dad badan oo rayid ah oo lagu dilay halkaas marka loo eego Butsja, halkaasoo mas’uuliyiinta Ukraine ay rumeysan yihiin in ku dhawaad ​​300 oo rayid ah ay dileen ciidamada Ruushka.
* Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyj ayaa aaminsan in Ruushku u muujin doono sidii askarta Ukraine ay muwaadiniintooda ugu dileen Mariupol. – Waxaan halkan kula tacaamuleynaa kuwa wax soo weeraray oo aan wax bini’aadannimo ah ku jirin, ayuu madaxweynuhu ku yiri khudbad muuqaal ah. Duqa dhabta ah ee magaalada iyo qof ay u magacaabeen gooni u goosadka Donetsk inuu noqdo duqa cusub ee Mariupol, ayaa labaduba sheegay in ku dhawaad ​​5,000 oo rayid ah lagu dilay magaalada.
* 4,676 qof oo rayid ah ayaa laga daadgureeyay waddooyinka bini’aadantinimo ee magaalooyinka Ukraine shalay, sida laga soo xigtay tirooyinka ra’iisul wasaare ku xigeenka dalka Iryna Vereshchuk.
25/02/2022 - 01:16:39